Andrew Garfield nwere obi ụtọ ịghara ịbụ Spiderman | Nye m oge ntụrụndụ
Andrew Garfield nwere obi ụtọ ịghara ịbụ Spiderman
Onye na -eme ihe nkiri Andrew Garfield ekwuola na ajụjụ ọnụ a ọ na -enwe obi ụtọ na 'afọ jukwara ya' na eziokwu na "The Amazing Spiderman 3" emezughị. Ọ bụ ezie na nkatọ arụmọrụ ya dị mma nke ukwuu site n'aka ndị ọkachamara na ọha, Garfield kwupụtara na ekele maka ịghara ịnọgide na-abụ Spiderman, ọ rụọla ọrụ na ọ gaghị enwe ike ime ma ọ bụrụ Spider-Man.
"Ihe ịtụnanya Spiderman 2: Ike nke Electro" bụ ihe nkiri nke abụọ na nke ikpeazụ nke Andrew Garfield nyere uwe mwụda mgbidi. Daalụ ịhụ na ọ bịaghị n'ihu nke ga -emecha trilogy ahụ Ọ nweela ike ịrụ ọrụ na ọrụ ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ, Martin Scorsese na Mel Gibson.
N'ikwu eziokwu, enweghị m ike ịrụ ọrụ na Mel Gibson na Martin Scorsese ma ọ bụrụ na m mere Spiderman 3. Enwere m ọchichị dị ukwuu na m nwere ike ịga na fim wee hụ onye ọzọ na -egwu Spiderman, ọmarịcha Tom Holland.
1 Ọrụ ọhụrụ gị
2 Spiderman ya na Andrew Garfield
Ọrụ ọhụrụ gị
Ugbu a, Andrew Garfield na -emikpu n'ime ọrụ ndị na -eme ya obi ụtọ. N'aka nke ọzọ, "Hacksaw Ridge", nke ga -apụta nlọghachi Mel Gibson na nnukwu ihuenyo, ebe ọ ga -anọ n'okpuru iwu Martin Scorsese na "Silence", nke yiri ka ọ dị otu n'ime ndị na -akwado Oscar. N'afọ na -abịa, ọ ga -egosipụtakwa "Breathe" na "N'okpuru Ọdọ Mmiri Silver", nke mbụ ka na -eche onyonyo.
Spiderman ya na Andrew Garfield
Onye na -eme ihe nkiri kwuru Spiderman mgbe nkeji nke abụọ, nke ewepụtara na 2014 na nke ahụ wetara $ 700 nde n'ụwa niile, 50 erughị ndị nke anakọtara na 2012 na akụkụ nke mbụ. A tụfuru nkeji nke atọ n'ihi na nke abụọ ejikọghị ọha na eze nke ukwuu, Marvel chọkwara ịkụ nzọ na ụdị nke obere wee hapụ dike ahụ n'aka Tom Holland.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nye m oge ntụrụndụ » Cine » Ndị na -eme ihe nkiri » Andrew Garfield nwere obi ụtọ ịghara ịbụ Spiderman
Margot Robbie ga -etinye olu ya na mmegharị ihe nkiri nke "Peter Rabbit"
Wonderland: Were nke na -ekwupụta album ọhụrụ na njem na 2017